Ny anaran'ny vondrona tsara indrindra ho an'ny WhatsApp | Androidsis
Ny anaran'ny vondrona tsara indrindra ho an'ny WhatsApp
Aaron Rivas | 21/07/2021 20:00 | Fampiharana Android, WhatsApp
WhatsApp no ​​fampiharana fandefasan-kafatra mailaka be mpampiasa eran'izao tontolo izao, ary izany indrindra no antony mahatonga azy io ho fitaovam-pifandraisana ankafiziny indrindra amin'ny famoronana fifampiresahana eo amin'ny namana, olom-pantatra, mpianatra, mpiara-miasa, mpiasa ary fianakaviana. Na inona na inona fikasana na tanjon'ny vondrona noforonina tao amin'ny WhatsApp dia tsara foana ny manana anarana ho azy izay zavatra mahafinaritra, mahaliana, tany am-boalohany, mahatsikaiky, mahatsikaiky ary / na mamorona.
Izany no antony nitanisa an'ity lisitra ity anarana an-jatony azonao ampiasaina hamoronana vondrona ao amin'ny WhatsApp. Safidio ilay tianao indrindra amin'ny vondrona misy anao ary mihomehy miaraka amin'ny namanao mandritra ny fotoana fohy.
Ny anarana rehetra ho an'ny vondrona WhatsApp izay ho hitanao etsy ambany dia azo ampiasaina tahaka ny na koa, ampiasao izy ireo ho toy ny hevitra ary manova azy ireo araka izay itiavanao azy mba hisafidianana ny iray izay mifanaraka indrindra amin'ny lohahevitry ny vondrona izay ho noforoninao. Mandritra izany fotoana izany, Azonao atao ny manampy emojis (emoticons) toy ny tarehy, fitenenana, tarehimarika ary izay rehetra azonao eritreretina ho an'ny vondrona misy anao.
1 Anaran-tarika ho an'ny tarika zazalahy amin'ny WhatsApp
2 Anaran'ny vondrona tovovavy ho an'ny WhatsApp
3 Anaran'ny vondrona fianakaviana ho an'ny WhatsApp
4 Anaran'ny vondrona WhatsApp ho an'ny mpiasa sy ny mpiara-miasa
5 Vondrona WhatsApp ho an'ny ekipa fanatanjahan-tena
6 Anaran'ny vondrona WhatsApp ho an'ny olon-dehibe
7 Anaran'ny vondrona WhatsApp ho an'ny gym
8 Ahoana ny fomba hamoronana vondrona WhatsApp
Anaran-tarika ho an'ny tarika zazalahy amin'ny WhatsApp
Raha ao amin'ny vondrona WhatsApp miaraka amin'ny namanao ianao dia mety tianao ny iray na maromaro amin'ireto izay angoninay etsy ambany. Araka ny fantatsika fa ny tarika zazalahy no be vazivazy indrindra ary taloha ihomehezana miaraka amin'ireo compas, dia ho hitanao ny fisafidianana an-tsokosoko avy amin'ny mahatsikaiky sy mahatsikaiky indrindra ka hatramin'ny manan-danja indrindra sy mahatsikaiky indrindra.
Crème sy crème.
Ireo mpamaly faty (na The Avengers).
Lohahevitra tsy voafehy.
Ny namana amin'ny safidy, fa tsy amin'ny adidy.
Aza manaja tena. '
Ireo izay manara-dalàna hatrany.
Ireo tsy mitomany.
Ny farany milahatra.
Miray hina hatrany.
Mpinamana alohan'ny vehivavy.
Iza no mitondra ranomandry?
Band tsy misy ilana azy.
Ireo tsy mivadika.
Meme, labiera ary fety.
Alkoholika tsy fantatra anarana.
Iray ho an'ny rehetra ary iray ho an'ny rehetra.
Hatsikana mainty tsara.
Adala, fa tsy mpamitaka.
Ry zalahy fotsiny.
Tsy manam-bola, fa miaraka amin'ny tumbao '.
Ny tratra volo lahy.
Ireo izay mifehy foana amin'ny làlana.
Ankizilahy ratsy mandritra ny fiainana.
The Singles 4EVER.
Tsy mino an'iza.
Manenjika antsika ny faharanitan-tsaina, fa haingana kokoa isika.
Ny fitambarana izay tsy mahomby.
Tsy misy varotra ary tsy misy zavatra tsara atao.
Ratsy, nefa mahafinaritra.
Fiara, moto ary fety.
Ireo izay tsy manana fihetseham-po.
Ny efitrano miafina.
Rahalahy avy amin'ny reny hafa.
Ilay tsy matoky.
Ny fety aloha, avy eo ny fety, ary farany ny fety.
Ny ekipa ratsy fanahy.
Tafaray isika fa tsara kokoa.
Miara-mandeha isika, miara-maty.
Parranderos ho faty.
Ireo afaka satria tiany.
Ny olona ho an'ny tenany.
Ireo olon-dratsy eo amin'ny manodidina.
Manohitra antsika izao tontolo izao.
Hofoanana ny lalàna.
Nesorina tamin'ny vondrona ianao.
Ny mpilalao ny fiainana.
Ireo izay mamo faran'izay kely mamo.
Ireo tia ny fiainana tsara.
Ilay vondrona kely any aoriana.
Ny fitondran-tena ratsy.
Tsara tokoa, tena vaovao.
Izay tsy misy nanjary zavatra rehetra.
Ny ovy be indrindra.
Tsy mijery ny sisiny.
Misaraka rehefa teraka.
Ny zoro mifosa.
Voarara ny miaraka sipa.
Ilay sekoly taloha.
Izay mifanohana foana.
Meme, meme ary meme bebe kokoa.
Peratra ady totohondry.
Fahamatorana alohan'ny lalao ... sa ny mifanohitra amin'izay no izy.
Ny tsiambaratelon'ny tendrombohitra.
Ireo izay mandika azy indrindra.
Mihoatra ny mpirahalahy, mpirahalahy isika.
Mpiasa tsy miala sasatra.
Mpikomy tsy misy antony.
Anaran'ny vondrona tovovavy ho an'ny WhatsApp
Ny tovovavy dia misoko mangina kokoa ary afaka mifamatotra bebe kokoa amin'ny sakaizany, amin'ny ankapobeny. Izy ireo koa dia iray amin'ireo olona mifankatia indrindra, saingy tsy noho izany antony izany no mankaleo azy ireo; ny mifanohitra amin'izay no izy. Noho izany, eto ambany izahay dia nanonona anarana maromaro ho an'ny vondrona tovovavy azonao ampiana amin'ny vondrona WhatsApp anao.
Ireo nahazo fahefana.
Tafaray hatrany ny namana.
Andriambavy tsy misy Andriana.
Tsy manam-paharoa sy tsy azo soloina.
Adala amin'ny lavanty.
Ny tovovavy powerpuff na zazakely.
Ny fifosana no fitiavantsika.
Mampiseho izany tsotra ianao aloha.
Glamor madio amin'ny 100.
Iza no vonointsika?
Ny rumberas ny tanàna / tanàna.
SARY (Sakaiza akaiky indrindra mandrakizay).
United dia tsara tarehy kokoa isika.
Ilay tsy azo sarahina indrindra.
Miaraka noho ny antony, nosarahan'ny fiainana.
Vehivavy tsara tarehy.
Ireo miaraka amin'ny makiazy mamirapiratra.
Iza no manohitra?
Mijanona eto ny zava-mitranga eto.
Voarara ny miaraka amin'ny sakaiza.
Anaran'ny vondrona fianakaviana ho an'ny WhatsApp
Matetika ny fianakaviana dia akaiky sy be fitiavana. Na izany aza, ny sangisangy sy ny resaka izay toa eo amin'ny samy mpinamana dia tsy nandratra mihitsy, ary kely kokoa amin'ny nenitoan'i bochinchera. Izany no antony nisafidiananay anarana mahafinaritra sy adala maromaro azonao ampiasaina amin'ny vondrona fianakaviana ao amin'ny WhatsApp. Misy koa ny hafa somary matotra kokoa noho ny tianao.
Ny klioban'ny tantara an-tsehatra.
Fianakaviana tsy misy adidy.
Fianakaviana aloha, avy eo namana.
Ny vokatry ny filan-dratsy amin'ny alina.
Neny miady sy ny tsodranon'izy ireo.
Aiza ianao no mila mangataka alalana.
Trano mahamamy ny mody.
Tsy fantatro ireo olona ireo.
Adala madio ary tsy misy mahazatra.
Inona no mitranga rehefa tsy mampiasa fiarovana ianao.
Pizza an'ny fianakaviana.
Fiainana sy ra.
Anaran'ny vondrona WhatsApp ho an'ny mpiasa sy ny mpiara-miasa
Ao amin'ny birao sy saika ny tontolon'ny asa dia zava-dehibe hatrany ny fananana sy fitazonana ny fifandraisana tsara amin'ireo mpiara-miasa sy mpiara-miasa. WhatsApp dia iray amin'ireo fampiharana lehibe indrindra amin'ny famoronana vondrona asa ary, noho io antony io indrindra, ny sasany amin'ireto anarana manaraka ireto dia mety ho tonga lafatra ho an'ny vondron'asan'ny orinasa. Betsaka ny mahatsikaiky sy mahatsikaiky, ny hafa tsy dia be loatra.
Mihoatra ny ekipa iray fianakaviana.
Miasa mafy sa maharitra amin'ny asa?
Misaotra an'Andriamanitra zoma!
Ireo izay miady saina.
Raha tsy misy fihenjanana dia tsy misy vokatra tsara.
Ny orinasa no tranoko faharoa.
Androany dia mivoaka izy io.
Ho ela velona ny kafe!
Halako ny alatsinainy.
Tonga eto ny sefo.
Vondrona WhatsApp ho an'ny ekipa fanatanjahan-tena
Matetika amin'ny ekipa fanatanjahan-tena, na fanatanjahan-tena toy ny baolina kitra, baseball, basikety ary ny hafa rehetra dia betsaka ny firaisana ary ny fihomehezana dia tsy misy foana, ka izany no mahatonga azy ireo ho tonga iray amin'ireo faribolana finamanana tsara indrindra. Raha te hifandray hatrany rehefa tsy misy hetsika dia tsara ny manana vondrona WhatsApp miaraka amin'ireto anarana manaraka ireto izay lisitray eto ambany:
Ny fanatanjahan-tena no fiainana.
Ho ela velona ny baolina kitra.
Ho antsika izany fifaninanana izany.
Miray kokoa noho ny musketeers.
Ho fandresena hatrany.
Baseball no tiako.
Ireo izay tsy mahazo iray.
Tsy resy amin'ny ady ny resy amin'ny ady.
Anaran'ny vondrona WhatsApp ho an'ny olon-dehibe
Raha manana vondron'olona namana olon-dehibe ianao, dia mety ho samy hafa be ny lohahevitra resahina, ary indraindray dia somary lany andro ho an'ny ankizy sy ny tanora. Izany no mahatonga ny anarana ho an'ny vondron'olon-dehibe amin'ny WhatsApp mety ho somary manome endrika ihany, nefa koa mampihomehy na matotra.
Manao vazivazy fotsiny, fa raha tianao izany tsy manadala.
Ny saina misokatra.
Labiera sy trano.
Eto misy mandeha.
Birras sy fiainana tsara.
Fitsaboana amin'ny faran'ny herinandro.
Ny ligin'ny tsy rariny.
Ilay farany dia hiala izahay.
Fiatoana amin'ny fianakaviana.
Aza avela hisy hahalala izay mitranga eto.
Ny toerana G.
Matotra, nefa tsy mangidy.
Indray mandeha ihany no miaina.
Ankizy ao an-trano.
Ny soa iraisana.
Tehaka avy amin'ny mamatonalina.
Aza manaja azy ireo. '
Anaran'ny vondrona WhatsApp ho an'ny gym
Betsaka ny olona maniry ny hitazona endrika sy fahasalamana ara-batana tena tsara. Ny sasany te-hanao izany mba hahavery ny lanja, ny hafa maniry ny mifanohitra amin'izay fotsiny. Misy ihany koa ireo maniry ny hanangana hozatra na, raha ny vehivavy, manome endrika maha-lahy sy maha-vavy ny vatany.
Na inona na inona tanjona kendrenao, raha miaraka amina vondron'olona ianao, dia tsy mankarary ny vondrona WhatsApp, ary tsy latsaka ny iray natokana ho any amin'ny gym mba hampiofana na any amin'ny kianja fanaovana fanazaran-tena. Noho izany dia tokony hojerenao ireto anarana manaraka ireto.
Mitsemboka vao mihinana.
Gym na tsia.
Ny mahasalama indrindra.
Voahitsakitsaka taloha sy ho avy amin'ny hozatra.
Zero matavy, proteinina feno.
Ahoana ny fomba hamoronana vondrona WhatsApp
Ary farany, raha tsy hainao ny mamorona vondrona amin'ny WhatsApp, dia lazainay aminao izany. Araho fotsiny ireo dingana etsy ambany:
Sokafy ny WhatsApp ary kitiho ny kisary miaraka amin'ireo teboka telo izay hita eo amin'ny zoro ambony ambony amin'ny interface.
Avy eo dia haseho ny varavarankely mampiseho safidy dimy; tsindrio ilay voalohany, dia ny vondrona Vaovao.
Aorian'izay, safidio ireo fifandraisana rehetra izay tianao ampidirina ao amin'ny vondrona WhatsApp anao.
Mba hamaranana dia soraty ny anaran'ny vondrona tadiavinao ary ampidiro sary piraofilina ho an'ny vondrona, izay mety ho ny sary safidinao ihany koa.
Ary farany, tsindrio ny bokotra maitso dia ho noforonina ny vondrona misy anao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Ny anaran'ny vondrona tsara indrindra ho an'ny WhatsApp
Inona no atao hoe Funimate ary ahoana no fomba ahazoana tombony betsaka amin'izany